Iphepha Lomsebenzi Wombhali Wombhalo 1 Phendula I-Key
Yeka! Ngaphambi kokuba ufunde, ngaba usuqedile iShicilelo sokuSebenza seTone 1 , kuqala? Ukuba akunjalo, buyela emuva, uphendule le mibuzo uze ubuyele apha uze ufumene oko ufumene kakuhle kunye noko ungase ulahleke khona.
Ukuba unomdla wokuba ithoni yombhali unjani kwaye uzibuze ukuba ungayifumana njani, nantsi ezintathu zeendlela ongazisebenzisayo ukujonga ithoni yombhali xa ungenayo inkcazelo.
A. Ukungabikho kwamanye amazwe kunye nokucinga.
B. Umnqweno womfokazi ukukhawuleza ukufika kwigumbi lakhe.
Impendulo echanekileyo ngu B. Usemzini unqwenela ukufudumala. Siyazi ukuba ngenxa yokuba ehlanganiswe kwikhephu kwaye ecela uthando lomntu, into esinokuyicinga nje kukuba kubanda. Ngoko nangona siyazi ukuba ayinakonwaba, impendulo echanileyo ayikho D. Umbhali usebenzisa amagama athi "imvume ekulungeleyo," oku kuthetha ukuba "imvume ngokukhawuleza okanye ngokukhawuleza" kwemali kunye neengqekembe "zithintela" etafileni ukubonisa ukukhawuleza.
Ewe, siyazi ukuba akayikhathazi, kodwa ibinzana zibonisa isivinini.
IPASSAGE 2 '
Impendulo echanekileyo nguD. Nangona singayifunde nto ngaphaya komgca wokuqala, siya kuqonda ukuba umbhali wayenxungukisiwe ngento ethile. Umbhali uqhubeka wenza umonakalo ngokumbeka indoda engathembekiyo kumfazi wakhe oxakekile. UAusten ubonisa umama njengento yokugxotha, ukuhleba, nokunyamezela. Ukuba u-Austen wayecaphukiswa yile ngcamango, wayeya kwenza unina angenakwenzeka. Ukuba wayemangaliswe ngcamango, ngoko wayeya kwenza umyeni akhathazeke xa uMnu. Bennet ekhupha. Ukuba wayamkela le ngcamango, mhlawumbi wayengeke abhale malunga nayo ngendlela enobungqina. Ngenxa yoko, iCandelo D libhetele kakhulu.
Impendulo echanekileyo ngu A. Le nto ithetha ngetoni yecaccer ngokubanzi. Uhlazo malunga nombono womntu wokutshata nabasetyhini abaselula kubantu abacebileyo. Isitatimende sakhe sokugqithisa, "inyaniso eyaziwayo emhlabeni wonke" ngumzekelo wokuba nombono ongenakucingelwayo, ongowokugqithisileyo isingenakuthi sithathwe ngokoqobo. "Nangona yena ngokwabo angamhlambalaza okanye ahlazise ngcamango yakhe, ithowuni yakhe ayibonakalisi kulo satire.
Ukhetho oluchanekileyo nguD . Apha, impendulo kufuneka ibonakalise ngokubanzi ulwimi kulwimi. Amagama asetyenziswa yiPoe ayinkimbinkimbi, njengoko isakhiwo sakhe somgwebo. Isakhiwo seSigqibo B nesigqibo se-S sinelula kwaye Impendulo ye-Choice B ayilunganga ngokusekelwe kwisicatshulwa. Ukukhethwa A kubonakala kunengqiqo uze uyibeke ngokuchasene neChoice D, esebenzisa isakhiwo esiyinkimbinkimbi kunye nolwimi olufana nelo lusetshenzisiweyo.
Ukhetho oluchanekileyo nguC. Nangona umlingiswa uziva uxinzelelo ekubukeni indlu, i-Poe izama ukwenza umfundi abe nexhala kwimeko. Yintoni eya kuza? Ukuba wayezama ukwenza umfundi aziva ecinezelekile, wayenokuthetha nento ethile yedwa. Kwaye akazange azame ukuphazamisa umfundi kulo mcimbi, nokuba kunjalo. Wayeza kusebenzisa umxholo onokuzithemba kunokuba athembele kumnyama, amazwi agxininisayo kunye neentetho azenzileyo. Ukhetho A luphelile! Ngenxa yoko, iChoice C iyona mpendulo efanelekileyo.